देवकोटा मात्र एउटा शब्दको रुपमा परिभाषित हुँदैन । देवकोटा मात्र एउटा शब्दमा रुपान्तरित छैन जसलाई चार अक्षर मिलेर बनेको भनॆर प्रमाणित गर्न सकियोस् । न कुनै थर विशेषमा सीमित छ यो शब्द न कुनै खेलौना बनाएर खेल्ने जमातहरुको लागि यो शब्द सम्पत्तिको रुपमा बाँडफाँड हुन्छ । यो शब्दको महानता यसको विशालतामा मात्र परिलक्षित हुन्छ । यसको विस्तृततालाई अनुभूत गर्न त्यसैभित्र चुर्लुम्म डुब्नुपर्छ डुबुल्की मारेर । यो शब्दसँगै इतिहासको ढोका उघ्रिन्छ र त्यसभित्र दह्रो मुटु लिएर प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ । यो शब्दसँगै सँस्कृतिको जीवन्त सङ्गीतको गुनगुनाहटले सरगमहरुभन्दा माथि उठेर लय र ताललाई सजीवता प्रदान गर्छ र त्यसलाई स्पर्श गर्न पारदर्शी मन बोकेर अग्रसर हुनुपर्छ । फर्मुलामा बाँच्ने र फर्मुलालाई आदर्श बनाएर यात्रारत रहने मान्छेहरुले वास्तवमा यो कुरा बुभुदैनन् अर्थात बुभुन नचाहेका हुन सक्छन् । हजारौं समयका बहावहरुलाई जितेर अविस्मरणीय भएको छ यो शब्द आजसम्म । हजारौं विद्रोहहरुको प्रतिध्वनि स्वरुप झन् प्रगाढ भैरहने छ यो शब्द अनन्त भोलिसम्म । कति पहाडहरु जोरी खोज्दै आए यो शब्दलाई पराजित गर्न तर ती पहाडहरुले झुक्नुपर्यो यो शब्दको सामु । कति तापहरु प्रज्वलित रुपमा दन्किए यो शब्दलाई पगालेर गाल्न तर ती तापहरुलाई पानी हुँदै गल्नुपर्यो यस शब्दको ओजस्विता अगाडि । केही लागेन दशकौंदेखि शासन गर्ने शासकहरुको यो शब्द कहिल्यै शासित हुन मनपराएन । केही लागेन मालिकहरुको यस शब्दलाई गुलामीको रङ्गमा मौलिकताको भ्रम दिन । यॊ शब्द कहिल्यै दासताको आनन्दमा रमाउन नै जानेन ।
देवकोटा एउटा शब्द नै प्रर्याप्त छ समयको लामो कालखण्डलाई बुझ्नका निम्ति । देवकोटा एउटा शब्द नै प्रशस्त छ इतिहासको मौनतालाई तोड्नका लागि । देवकोटा एउटा शब्दले नै परिलक्षित गर्छ सँस्कृतिको महाअनुष्ठानलाई । देवकोटा एउटा शब्द नै समयभन्दा अघि छ इतिहासलाई कठघरामा उभ्याउनमा ।
तपाईलाई लाग्ला एउटा शब्दले नै कसरी यति ठूलो अर्थ बोक्छ । हो तपाई गलत हुनुहुन्न । प्रत्यक्ष रुपमा देवकोटा मात्र एउटा शब्द हो । केही मान्छेहरु यो शब्दलाई विवाहको लागि गोत्र जुराउन चिना हेर्नका निम्ति प्रयोग गर्छन् भने केही मान्छेहरु यो शब्दलाई जात विशेष हेरेर सङ्कुचित बनाउने लाख कोशिश गर्छन् । केही मान्छेहरु यो शब्दलाई बाबु बाजेबाट प्राप्त भएको बिर्ताको रुपमा उपभोग गर्छन् भने केही मान्छेहरु भने व्यक्ति विशेषसँग नजिक हुन यसलाई प्रशस्त रुपमा प्रयोग गर्छन् । कहिलेकाहीँ त लाग्छ शब्दहरु निहत्था मरिरहेछन् मान्छेहरुका कारण । शब्दहरु आत्महत्या गरिरहेछन् मान्छेहरुका कारण । हुन त शब्दलाई मान्छेहरु आफ्नो सुरक्षाको रुपमा प्रयोग गर्छन् र संसार जितेको भ्रममा मख्ख पर्छन् । मान्छेहरु शब्दलाई गुलाम बनाउन पाउँदा आनन्दित हुन्छन् र त्यसलाई बजारमा बिक्रीका लागि राख्छन् । मैले भन्नुपर्छ शब्दप्रति जुन न्याय हुनुपर्ने हो त्यो आजसम्म भएकै छैन । मान्छेहरुले शब्दलाई कैद गरे भन्दैमा शब्दलाई दास मान्नु त्यसप्रति ठूलो कृतध्न हुनु हो । मान्छेहरुले यो कुरा अध्ययन नगरिकन पटक्कै सिक्ने छैनन् । मान्छेहरुले शब्दलाई बजारमा बिक्री गरे भन्दैमा त्यसैलाई आदर्श मानेर बस्नु आफ्नो नपुङ्शकता प्रदर्शन गर्नु सिवाय अरु केही होइन । मान्छेहरुले यो कुरा कहिले बुझ्लान ? कृष्णचन्द्रिसंह प्रधानले भनेझैं "शब्द वास्तवमा ब्रह्म" हो । वास्तवमा शब्द महान छ त्यसप्रति खेलवाड गर्नु उचित छैन ।
प्रसङ्ग उठेको हुनाले शब्दप्रति घोर अन्याय भएको एउटा घटना म यहाँनेर पाठकहरुसँग बाँड्न चाहन्छु । शब्दलाई मात्र शब्दको रुपमा लिँदा अर्थको अनर्थ भएको प्रमाणित सत्य हो यो ।
'देवकोटा अध्ययन केन्द्र'मा एकदिन केही मान्छेहरुको अचानक आगमन हुन्छ । एक अर्कोसँग एक अर्कोको परिचयको सिलसिला अघि बढ्छ । देवकोटा थर धारण गरेका प्राणी रहेछन् उनीहरु परिचयको क्रमपछि तत्कालै थाहा हुन्छ । स्कूल कलॆजमा पढाउने जमात थियो त्यो । उनीहरु भन्छन् 'देवकोटाहरुको अध्ययन गर्ने ठाउँ रहेछ यो हामी देवकोटाहरु हौं वंशावली राख्न यहाँ आएका ।' अचम्म लाग्छ मलाई बाहिर ठूलो बोर्ड राखिएको हुन्छ र प्रष्ट देखिने गरेर लेखिएको हुन्छ 'सार्वजनिक पुस्तकालय' । मलाई यो देशको शिक्षाप्रति वितृष्णा जागेर आउँछ । त्यत्रो पढे-लेखेका मान्छेहरु कुन ठाउँमा प्रवेश गरिदैछ सामान्य जानकारी पनि नराखिकन भित्र पस्छन् र आफ्नो जातको रेकर्ड राख्न ठूल्ठूलो स्वरमा कुरा गर्छन् ।
टोली नेताजस्तो देखिने एकजनाले भन्दै हुन्छ "म साहित्य पढाउँछु कलेजमा ।"
म आश्चर्यचकित हुन्छु । कलेजमा साहित्य पढाउने प्राध्यापकलाई देवकोटा शब्दको बारेमा थाहा छैन । एक मन त लाग्छ देवकोटालाई बदनाम गराउन आएका हुन् उनीहरु । हुनसक्छ देवकोटा शब्द मात्र थर विशेष हो, अरु केही होइन भनी त्यसलाई सीमित पार्न आएका हुन् उनीहरु । जे होस् केही मान्छेहरुको प्रयत्नद्वारा नेपाल र नेपालीको लागि अब साझा भैसकेको देवकोटा शब्द थर मात्र हुन सक्दैन भनेर म आफ्नो विचारलाई फेरि पनि यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु ।
देवकोटा शब्दसँग म एकदमै नजिकै छु भन्दा म गलत हुन्न । कारण हरेक दिन म देवकोटा अध्ययन केन्द्र जान्छु र त्यो शब्दको आराधनामा नै केही समय आफुलाई लीन गराउँछु । मलाई बारम्बार लाञ्छित गर्ने प्रयत्न नगरिएको भने होइन । पटक पटक भनिएको पनि छ "यो मान्छे देवकोटा थर भएको कारणले नै त्यहाँ जान्छ ।" म यतिखेर प्रष्ट हुन चाहन्छु देवकोटा थरसँग मेरो टाढाको पनि नाता छैन । कथित थरको मोह संवरण गर्न नसकेर म त्यहाँ जाने होइन बरु श्रद्धामा अभिषिक्त आस्थाको कारणले म त्यहाँ जाने हुँ । पुस्तकप्रतिको रुचि बढाउन र अध्ययन गर्ने सँस्कृति बचाउन म त्यहाँ जाने गर्छु । हो म प्रत्येक दिन केही घण्टा देवकोटा शब्दप्रति समर्पित हुन्छु र पुस्तकालयको काममा जुट्छु यो प्रक्रिया आफैं आरम्भ हुन्छ यसमा कसैको बाध्यताले काम गरेको हुँदैन । लाग्छ देवकोटा शब्दसँग म झन् झन् नजिक भैरहेछु र यो शब्द ममा समाहित भएर गम्भीर आकार लिइरहेछ । मानौं यस शब्दले एउटा यस्तो आकार ग्रहण गरिसकेको छ मभित्र जसलाई मैले भुल्न चाहेर पनि भुल्न सक्दिन र म त्यस बढ्दै गएको आकारलाई साँचो सम्मान प्रकट गर्न हरेक दिन देवकोटा अध्ययन केन्द्रु जान्छु । जे होस् देवकोटा शब्द अब एउटा यस्तो सत्य हो जसलाई कुनै पनि कारणले झुठो प्रमाणित गर्न सक्दैन ।
तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला देवकोटा भनेर यहाँ पटक-पटक कसलाई भनिएको हो । हो तपाई एकदमै सही हुनुहुन्छ । वास्तवमा देवकोटा भनेर महाकविलाई नै भनिएको हो । देवकोटालाई लक्ष्मीप्रसाद भनिरहन आवश्यक छैन । आजको यथार्थले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । एउटा यस्तो परिचय जसको आधार एउटै मात्र शब्दमा निर्देशित हुन्छ एउटा यस्तो अर्थ जसको मूल्य एउटै मात्र शब्दले समयका स्वरहरुभित्र भेट्छ त्यो शब्द हो देवकोटा । अरु कुनै शब्द खोजेर देवकोटाको परिचय दिन खोज्नु धृष्टता सिवाय केही हुनै सक्दैन ।
देवकोटालाई मैले मुनामदनबाट नै पढ्न सुरु गरेको हुँ भन्दा म गलत हुन्न । सामान्य उमेरमा नै पढेको यो कृतिले पछि फराकिलो मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ममा । एक प्रकारको उत्प्रेरणाद्वारा अध्ययनप्रतिको मोह जगाएको हुनाले मुनामदनको अर्थ र त्यसको सन्दर्भ अविस्मरणीय रहेको छ मभित्र । मुनामदनको प्रेमले केटाकेटी उमेरमा नै जरा गाडिसकेको थियो र मदनजस्तै भोट गएर पैसा कमाउने अभिलाषालाई मैले उद्देश्य बनाइसकेको थिएँ । ८-१० वर्षको उमेरमा नै परेको यो प्रभाव वास्तवमा कमजोर थिएन पनि र त्यसबाट मलाई मुक्त हुन धेरै समय लागेको थियो । जीवनले एउटा अनौठो खेल खेल्यो भनेर भन्नुपर्दछ । म मदनझैं पैसा कमाउन भोट गइन । भोट मात्र नगएको होइन पैसा नै नकमाएको कारण असङ्ख्य पीडाहरुसँग भने पटक-पटक साक्षात्कार गरिरहेँ जीवनभरि । कति कालखण्ड आए, कति कालखण्ड गए त्यसको कुनै सीमा नै छैन । वास्तवमा देवकोटालाई देवकोटा बनाउन मुनामदनको ठूलो हात रहेको थियो यो कुरा आज घामजस्तै छर्लङ्ग भैसकेको छ । सिर्जनाकालको आरम्भमा नै यति मीठो कृति दिनु नेपाल र नेपालीको लागि ठूलो देन रहेको छ देवकोटाको ।
देवकोटाको कवित्व शक्तिको परिचय मैले केटाकेटीमै पाए पनि 'यात्री' कविताले उनलाई गम्भीर कविका रुपमा मेरो अगाडि उभ्याएको थियो दार्शनिक रुपमा एकदमै सक्षम कवि । जीवनवादी तथा मानवताप्रेमी देवकोटालाई यात्री कविताका प्रत्येक हरफहरुले पटक पटक उद्घाटित गरेका छन् त्यहाँ मानौं तिर्खाएको यात्रीले आफ्नो प्यास मेट्न कुवा प्राप्त गरेझैं निरीह र निहत्था मान्छेहरुको पीडालाई सम्बोधन गरिएको छ यात्री कवितामा । विचारसहित कलाको राम्रो संयोजन गरिएको यो कविताले मेरो स्कूल जीवनदेखि नै मलाई परिवर्तनको लागि उद्वेलित गराएको थियो । यस कुरालाई त्यस कविताको जीत नै थियो भनेर भन्नुपर्छ ।
हुन त देवकोटा सरलभन्दा सरल कविता पनि लेख्न सक्थे र साथसाथै बौद्धिक रुपमा सम्पन्न कविता पनि । कविता मात्र होइन उनले धेरै विधामा कलम चलाएका छन् र अत्यन्त सफल पनि छन् ती विधाहरुमा । चाहे कथामा होस् या उपन्यास विधामा उनको लेखनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । प्रबन्ध होस् चाहे नाटक उनको लेखनमा अद्भुत शक्तिले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ माधुर्यता र शालीनताको रुपमा । अनुवाद साहित्यमा त एउटा मापदण्ड नै कायम गरे देवकोटाले आउँदो पिढीँका लागि । अनुवाद साहित्यको एउटा सफल मानक नै तयार भयो भनेर भन्नुपर्छ नेपाली साहित्यका लागि ।
जब निबन्धको चर्चा चल्छ तव देवकोटाभन्दा अर्को निबन्धकारलाई सम्झन केही बेर लाग्न सक्छ कारण देवकोटाका निबन्धहरुमा शाश्वतताको प्रश्नले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ कलात्मक रुपमा । जीवनलाई हेर्ने र जगत्लाई नियाल्ने प्रकि्रयामा देवकोटाका निबन्धजति सायदै अरुका निबन्धहरु सक्षम रहेका छन् । 'दाडिमको रुखनेर' र 'लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह' पढ्दा लाग्छ मान्छेको सर्वोच्व सत्ता त्यहीँ कतै निहित छ । अन्त खोज्न नै जानु पर्दैन । मान्छेलाई सम्बोधन गर्न र मान्छेलाई परिवर्तनको लागि प्रेरित गर्न देवकोटाका निबन्धमा रहेको अद्भुत शक्तिले जति भूमिका खेलेको छ त्यति उनका कविताबाहेकका अरु विधाहरुले भने खेलेको देखिदैन यो कुरा पनि सत्य हो । यसमा सायदै कसैको दुई मत होला ।
देवकोटाले चाहे समाजसेवाको क्षेत्रमा होस् या शिक्षाको क्षेत्रमा होस् उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् । नेपालमैं पहिलो पुस्तकालय खोलेकोमा त उनलाई राणाहरुले सजाय पनि दिएका थिए । लाइव्रेरी काण्ड को रुपमा यो प्रसङ्ग आजसम्म चर्चित नै छ । राजनीति तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा उनको योगदानलाई कसै गरे पनि भुल्न सकिदैन । यस्ता देवकोटालाई शताब्दी पुरुषको रुपमा मरोणोपरान्त रुपमा भए पनि सम्मान गरेर उनलाई संझने हो भने उनीप्रति सही प्रकारले न्याय होला भन्ने मलाई लाग्दछ ।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ एउटै मान्छेमा यति धेरै शक्ति कसरी सिञ्चित भयो होला । मलाई पटक-पटक लागेको पनि हो उनमा रहेका केही शक्ति अरु मान्छेले पनि प्राप्त गरेका भए उनीहरुको केही मात्रामा भए पनि उद्धार हुने थियो र पहिला र अहिलेको स्थितिमा निकै फरक हुन सक्थ्यो त्यस शक्तिको कारणले । एक मन त लाग्छ देवकोटामा मात्र शक्ति हस्तान्तरण गरेर अरु मान्छेप्रति निकै नै अन्याय भएको छ । किन अरु मान्छेहरु होचा र पुड्का देखिन्छन् देवकोटाका सामु यो प्रश्न दिन प्रतिदिन ज्वलन्त हुँदै व्यूझन्छ । किन मान्छेहरुमा चेतनाको स्तरमा देवकोटा जति तीव्रता पाइँदैन समयका मोडहरु धेरै अघि बढे पनि । तर यो विवादको विषय होइन पनि । कारण कसैको प्रतिभा र क्षमताको कारण अरु मान्छेहरु साना मसिना देखिन्छन् भने यसमा देवकोटाको के दोष छ ? र देवकोटाको शक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन पनि । राहुल साँकृत्यानले भने झैं देवकोटा एक्लै पन्त, प्रसाद र निराला हुन् । होइनन् भनेर भन्नुको कुनै औचित्य नै रहँदैन जबसम्म देवकोटालाई प्रतिभा र क्षमतामा अर्को मान्छेले क्रस गर्न सक्दैन । उनको विशिष्टतालाई यही कुराले नै प्रमाणित गर्छ ।
धेरै भाषाका ज्ञाता देवकोटाप्रति मेरो मोह झन् झन् बढिरहेछ । नेपाली साहित्यलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने पहिलो लेखक देवकोटा नै थिए । उनका अंग्रेजीमा पनि प्रशस्त रचनाहरु प्रकाशित छन् र भाषागत रुपबाट ती अत्यन्त सक्षम छन् पनि । शाकुन्तल महाकाव्य उनले नेपालीमा पनि लेखे र अंग्रेजीमा पनि । चाहे अनुवाद साहित्यद्वारा नेपाली साहित्यलाई धनी बनाउनमा होस् वा मौलिक रचना गरेर विदेशी साहित्यसँग प्रतिपर्धा गर्नमा होस् देवकोटाको योगदान अविस्मरणीय रुपमा रहेको छ । शेक्सपियरको कृति म्याकवेथ नेपालीमा अनुवाद गर्नु चानचुने प्रतिभाबाट संभव पनि थिएन कारण शेक्सपियरको भाषा आधुनिक अंग्रेजी थिएन सयौ वर्ष अगाडिको भाषा थियो त्यो । त्यस्तो भाषाबाट पनि देवकोटाले प्राकृतिक रुपमा त्यस कृतिलाई अनुवाद गर्नु उनको विलक्षणताको कारणले मात्र संभव भएको थियो भनेर आज चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पनि छ । सायद यस्ता धेरै कारणहरुले उनलाई भौगोलिक रुपमा गलत ठाउँमा जन्मिएका भनेर भनिएको हो । यो कुरा धेरै हदसम्म ठीक हो भनेर मान्नैपर्छ ।
मैले देवकोटालाई बच्चैदेखि पढ्न सुरु गरेर पनि आजसम्म अध्ययन गरिरहेकै छु, अझै सकिएको छैन अध्ययनको सिलसिला र कहिल्यै सकिदैन पनि । बच्चामा पढेको कुरा स्वतः आज अध्ययनको विषयवस्तु भएको छ । उमेरगत रुपमा तथा समयगत परिप्रेक्ष्यमा मौलिक अन्तर भने आएको छ देवकोटालाई पढ्ने र अध्ययन गर्ने क्रममा । देवकोटाका कृतिभित्र यस्तो किसिमको गहिराइ छ जसलाई आत्मसात गर्न एउटा ठूलो कालखण्ड नै त्यसमाथि समर्पित गर्नुपर्दछ सानोतिनो मेहनतद्वारा यो कुरा संभव पनि छैन । देवकोटाको लेखनमा यस्तो प्रकारको चमत्कारिक प्रयोग छ जसलाई बस्मा पार्न सफा मन र पारदर्शी मस्तिष्क त चाहिन्छ नै साथसाथै आफुमा प्रतिभा र क्षमताको पनि प्रशस्त विकास भैसकेको हुनुपर्दछ ।
देवकोटाको लेखनमा रहेको शैली प्रस्तुति विचार कला र भाषालाई अध्ययन गर्दा गर्दै एउटा ठूलो उमेरको तहले फड्को मारेको प्रष्ट रुपमा पत्तै भएन उमेर बढ्दै गयो तर देवकोटामाथि काम गर्नु पर्ने विषय भने झन् झन् थपिदै गयो । वास्तवमा यो यथार्थ हो यसबाट भागेर जाने ठाउँ नै छैन । यसबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने देवकोटाको आवश्यकता हिजोभन्दा आज झन् बढ्दै गएको छ । देवकोटाको महत्व हिजोभन्दा आज झन् प्रष्ट हुँदै गएको छ । देवकोटा केही समयका लागि मात्र होइनन् भन्ने कुरा यसबाट नै पर्याप्त आधार फेला पार्न सकिन्छ ।
हुन त उनीमाथि वर्गीय दृष्टिकोण राखेर अन्याय नभएको होइन तर अन्याय गर्नेले अन्याय गरे भन्दैमा उनलाई सीमित पार्नु ठिक छ कि छैन त्यो मनन गर्ने विषय हो । वास्तवमा केही मान्छेहरुले देवकोटालाई वर्गीय रुपमा हेर्ने गरेका छन् यसलाई देवकोटाप्रति गरेको असम्मानको रुपमा म लिन्छु । देवकोटाजस्ता विराट् प्रतिभालाई आ-आफ्ना सैद्धान्तिक तर्कको बलमा आफुतिर तान्ने प्रयत्न गर्नु भनेको षड्यन्त्रको झण्डा स्पष्ट तरिकाले फर्फराएर उनीप्रति राजनीति गर्नु हो । केही मान्छेहरुले गलत प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरेका छन् देवकोटालाई बदनाम गर्न । त्यो आफैमा एकदमै नराम्रो कुरो हो । देवकोटा सम्पूर्ण नेपालीका साझा सम्पत्ति हुन् कुनै वर्ग विशेषले बाबु÷बाजेबाट प्राप्त गरेको अंश होइनन् । उनी नेपाल र नेपालीका सरोकारका विषयमात्र होइनन् अन्र्तराष्ट्रिय जगत्ले पनि उनलाई ठूलो लेखकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यो कुरा अकाट्य सत्य भएर इतिहासमा सुरक्षित भैसकेको छ ।
महाकविको उपाधिले देवकोटालाई सही रुपमा न्याय गरेको कुरामा कसैको दुई मत हुन नै सक्दैन । महाकाव्यलाई गम्भीर रुपमा नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने काम देवकोटाले नै गरेका हुन् । महाकाव्यको महत्व र त्यसको गरिमालाई उनले सम्बन्धित ठाउँमा सम्मानित गराउन सहस्र पहलहरु गरे । असङ्ख्य कविताहरुका बलमा नेपाल र नेपालीको पहिचान शसक्त ढङ्गले देवकोटाले नै दिलाए भनेर भन्नुपर्दछ । त्यसैले उनी नै महाकवि उपाधिका सही हकदार थिए र कसैले उनीबाट यसलाई अपहरण गर्ने चेष्टा गरेमा त्यो साहित्यमा खलनायकको रुपमा सँधै स्मरणमा रहिरहनेछ ।
देवकोटाले महाकविको उपाधि जनताबाट नै प्राप्त गरेका हुन् । राष्ट्रकविको उपाधिजस्तो महाकविको उपाधि व्यक्ति विशेषबाट प्राप्त भएको भने होइन । सही प्रकारले उपाधी प्रदान गरिएन भने त्यसमा बद्नामीको डर सँधै भैरहन्छ जस्तो कविवर माधवप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकविको उपाधिले विवादको घेरामा ल्याएको छ । यस अर्थमा देवकोटा घिमिरेभन्दा धेरै सही छन् भनेर मान्नुपर्दछ ।
देवकोटालाई भजेर नै आफ्नो दुनो सोझ्याउने जमात भने नभएको होइन । कतिले देवकोटालाई प्रयोग गरेर नाम पनि कमाएका छन् र दाम पनि । देवकोटा त यस धरतीबाट विदा भए तर उनलाई जपेर वैतरणी तर्ने लश्कर भने दिन-प्रतिदिन बढिरहेछ । यस्तो दिन नआउला भनेर भन्न सकिदैन कि देवकोटालाई बदनाम गर्न यही लश्कर नै भोलि प्रमुख कारण बन्न सक्नेछ । आज देवकोटाको जीतमा हाँस्नेहरु भोलि उनलाई क्षतविक्षत पारेर नमुस्कुराउलान् भनेर भन्न सिकंदैन ।
जे होस् देवकोटा महान छन् र साथसाथै समयका पलहरुमा जीवन्त पनि । उनको योगदानको कारण नेपाल र नेपाली जनतामात्र सँधै गौरवान्वित हुने छैनन् बरु देवकोटालाई नै साक्षी राखेर विदेशीहरुले समेत भन्नेछन् देवकोटाको कारणले नै नेपाल र नेपालीले गौरव गर्ने धरोहर पाएका छन् गर्व गर्ने आधार भेट्टाएका छन् । परिचय दिने क्रममा उनीहरुका सामुन्यमा नै अभिव्यक्त हुनेछन् यी विचारहरु र उनीहरुले पटक-पटक भन्नेछन् यी महाकवि देवकोटा हुन् नेपाल र नेपालीले जन्माएका सच्चा सपुत जसलाई हामी सम्मानमात्र गर्दैनौं त्यत्तिकै रुपमा आदर पनि गर्छौं ।